Ụdị quartz: njirimara, mbido na nhazi | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 12/10/2021 10:00 | Geology
Quartz bụ mineral kacha baa ụba n'ime ala, ejiri ụdị, ụdị na agba dị iche iche mara ya, nke na -eme ka ọ maa mma nke ukwuu. N'ihi ụdị dịgasị iche iche na ụdị dị iche iche, ọ nwere ngwa dị iche iche. E nwere dị iche iche ụdị quartz na ha nwere ihe dị iche iche dabere na agba na ihe mejupụtara ha.
Ya mere, anyị ga -arara akụkọ a ka ọ gwa gị ụdị quartz dị iche iche dị n'ụwa na kedu ihe bụ njirimara ha.
2 Njirimara nke ụdị quartz
3 Ụdị quartz
3.1 Nkume kristal
3.2 Cryptocrystalline ma ọ bụ microcrystalline
4 Mmalite na nhazi nkume
5 Igwe mmiri quartz
Quartz gụnyere gel akụkụ silica na akụkụ abụọ oxygen. N'ihi ihe mejupụtara ha, ha na -eguzogide oke ma nwee akụrụngwa na -eme ka ịnweta a bụrụ ihe zuru oke maka ngwaọrụ dị ka elekere ma ọ bụ ngwaọrụ nnyefe redio. A na-ekwenyekwa na okwute ndị a nwere ike ịgwọ ọrịa, nchekwa na ike ịchịkwa ume. Mmepeanya oge ochie dịka ndị Egypt, ndị Aztek na ndị Rom na -eji ya eme ihe ịchọ mma n'ihi na ha kwenyere na ọ nwere ike ịgwọ ahụ na uche na iguzogide ike adịghị mma.
Quartz pụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla n'ụwa wee bịa na agba dị iche iche. Ha sitere na nke na -enweghị ntụpọ ruo nke enweghị ntụpọ, a na -ewerekwa na nke ọ bụla nwere ihe dị iche.
Dị ka ihe mejupụtara ya si dị, enwere ụdị quartz dị iche iche, ọ bụ ezie na ndị ama ama bụ amethyst, citrine na milky quartz, nke a na -atụle na gemology. Kedu ihe ọzọ, E nwere ụfọdụ ụdị quartz nke a na -ewere dị ka nkume dị egwu n'agbanyeghị uru ha bara. N'ozuzu, a na -ekewa ndị a dị ka ụdị kristal ha dị, ya bụ, agba ha. Ụfọdụ n'ime ihe a na -ahụkarị bụ:
Mmiri ara ehi na -acha ọcha quartz, translucent ma ọ bụ ihe na -adịghị mma.
Iko anwụrụ ọkụ, ụda na -acha ntụ ntụ.
Quartz Citrine, odo na -acha odo odo.
Amethyst, karịa ma ọ bụ obere na -acha odo odo.
Rose quartz, n'ihi ọnụnọ nke aluminom.
Njirimara nke ụdị quartz
N'ime njirimara kachasị n'etiti ụdị quartz niile anyị nwere ndị a:
Iko quartz bụ nke silicates, ọkachasị tectosilicates.
Ngwakọta kemịkal ya dị ọcha dabara na silicon dioxide (SiO2), nke bụ otu akụkụ sịlịkọn na akụkụ abụọ oxygen.
Ihe e ji mara ya bụ ike Mohs dị elu nke 7.
Njupụta ya ma ọ bụ ike ndọda ya dị nnọọ ka ọnụ ahịa nke ihe dị n'ime ala si dị, nke dị n'agbata 2,6 na 2,7 gram kwa cubic centimeter.
Ọ nwere sistemụ kristal isi kwekọrọ na sistemụ kristal hexagonal.
Ọmarịcha ya yiri kristal iko.
Ọdịdị ya na -edoghị anya ma ọ bụ na -egosipụta nghọta na -agagharị agagharị ma ọ bụ na -apụta ìhè, ka ọkụ wee nwee ike ịgafe na iko ahụ n'ụzọ dị mfe.
N'ikpeazụ, agba ya nwere akara enweghị agba ma ọ bụ adịghị adị.
Ụdị quartz na -ezo aka n'ụdị quartz niile, naanị ihe dị iche bụ na adịghị ọcha nke mejupụtara kristal dị iche iche, mana ihe mejupụtara kemịkalụ mbụ nke quartz (SiO2) ka dị. Ọdịiche nke ngwakọta kemịkal a na -enye quartz agba dị iche iche.
Quartz crystalline bụ ụdị quartz niile, ha na-apụta dị ka kristal ahaziri nke ọma na irighiri ihe a na-ahụ anya, ya bụ, ebe a ị nwere ike ịhụ nke ọma ụdị quartz na njirimara ya niile.
Ihe atụ kachasị nke otu a bụ kristal quartz (kristal nkume), ụmụ irighiri ihe ndị dị na granite na sandstone, na quartz dị na veins.
Cryptocrystalline ma ọ bụ microcrystalline
A na -emepụta otu a site na quartz mineral, nke nwere kristal quartz microscopic, ya bụ, anya efu agaghị ahụ kristal ndị a, mana ọnụ ha na -etolite ụdị quartz microcrystalline. A na -akpọkarị otu a chalcedony.
Mmalite na nhazi nkume
Quartz bụ mineral kachasị baa ụba na mbara ala, ọ bụ ya mere ejiri ya n'ọtụtụ ebe na nhazi ọkwa nke oke okwute, okwute sedimentary na nkume metamorphic. Mmalite ya, Jenesis na nhazi ya dabere nke ukwuu na mpaghara ala metụtara ya. A na-ahụta quartz na-akpụpụta nkume na-agwakọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mineral n'ụdị nkume dị iche iche, na-eme ka ọ bụrụ akụkụ nke ihe mejupụtara kemịkalụ ha na udidi okwute.
N'ime oke okwute, quartz na -eti miri emi na magma wee bụrụ akụkụ nke granite, diorite, granodiorite, wdg. Quartz crystallite iche nwere ike kristal site na mberede jụrụ nke lava na pyroclastic ihe, ọmụmaatụ, quartz bụ akụkụ nke rhyolite, pumice ma ọ bụ dacite. N'ikpeazụ na las rocas sedimentarias los granos de cuarzo van ịbịa site na disgregación, meteorización, erosión ebuga ebe ahụ desde otro tipo de rocas hasta nke kwekọrọ na nueva roca sedimentaria.
Igwe mmiri quartz
Igwe mmiri quartz ọ bụ ụdị kristal kristal kristal sitere na silicon dioxide na mmiri hydrothermal, na ọ na -emetụtakarị ụdị nkwụnye ego ịnweta ma ọ bụ akwara hydrothermal ma ọ bụ nkwụnye ego n'ụdị veins. Ọtụtụ n'ime akwara akwara quartz ndị a na -atọkarị ụtọ na nyocha ihe omimi ala n'ihi na ha nwere ike ịnwe ọla dị ụtọ dịka ọla edo, ọla ọcha, na zinc.
Hydrothermal quartz bụ ngwakọta nke magma nke nwere mmiri na kristal na -etolite lava. Usoro a na -esite na oke okpomọkụ na nrụgide dị n'okpuru elu ụwa, mmiri nwere ike igbari mineral dị iche iche. Ka ọnọdụ okpomọkụ nke magma na -ebelata, mmiri nke fọdụrụ bụ quartz na mmiri, ihe ngwọta a na -agafe na mgbawa dị n'oké nkume gbara ya gburugburu, ebe ọ na -ajụ oyi wee malite ịgbasa ngwa ngwa.
Usoro a nwere ike mepụta kristal mara mma quartz, yana kristal nke garnet, calcite, sphalerite, tourmaline, galena, pyrite, na ọbụna ọla ọcha na ọla edo. Otu n'ime ihe atụ doro anya nke ụdị a bụ amethyst, nke bụ quartz microcrystalline na -acha odo odo. Ụcha nwere ike ịdịwanye ike ma ọ bụ na -adịchaghị njọ, dabere na oke igwe (Fe + 3) nwere. A na -emepụta nke a na nkwonkwo nke ihe ngwọta bara ụba na iron oxide, na okpomoku dị n'okpuru 300 Celsius, ha ga -egosi agwa na -acha odo odo.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị nwere ike ịmụtakwu ụdị quartz na njiri mara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ụdị quartz